डिभी परेका सयौं नेपालीको अमेरिका जाने सपना यसरी भयो चकनाचुर! आयो डरलाग्दो रिपोर्ट - Arghakhanchi Saptahik
डिभी परेका सयौं नेपालीको अमेरिका जाने सपना यसरी भयो चकनाचुर! आयो डरलाग्दो रिपोर्ट
। आर्थिक बर्ष २०१६ का लागि ३८०१ जना नेपालीहरुलाई डिभी लोटरी परेपनि ५ सय
५४ जना डिभी विजेता नेपालीहरु भिसा पाउन अयोग्य भएका छन् । अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट अन्तरगत ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले यसैसाता सार्वजनिक गरेको विवरण अनुशार सन् २०१६ का लागि डिभी परेरपनि ५५४ जना नेपालीहरु अमेरिका आउन पाएनन् । अरु
डिभी लोटरी विजेता नेपालीहरुले सन् २०१५ को अक्टोबरदेखि सन् २०१६ को सेप्टेम्बरसम्म भिसा पाएपछि बाँकी ५ सय ५४ जना डिभी विजेता नेपालीहरुलाई भने भिसाका लागि अयोग्य ठहराइएको थियो । यसअघि सन् २०१६ का लागि डिभी लोटरी
जितेका कम्तीमा ३ सय नेपालीहरु भिसाका लागि अयोग्य हुने खसोखास साप्ताहिकले अनुमान गरेको थियो । तर त्यो भन्दा पनि धेरै नेपालीहरु भिसाका लागि अयोग्य भएका छन् ।
संसारभरबाट डिभी लोटरी विजेताहरुमध्ये ५० हजारका लागि भिसा उपलब्ध हुने नियम छ । जसअनुशार एउटा देशबाट ७ प्रतिशत अर्थात् ३५ सयको हाराहारीमामात्र डिभी लोटरी विजेताहरु अमेरिका आउन पाउने अमेरिकी सरकारको नियम रहेको छ । तर
डिभीको छनौट प्रकृयामा कैयन व्यक्ति अयोग्य हुने भएकाले उपलब्ध हुने भिसा नम्बर भन्दा धेरैलाई लोटरी पार्ने गरिन्छ । किशोर पन्थी/अमेरिकाबाट Loading...